भारतीय प्र’हरीद्वारा कपिलवस्तु घर भ’एका एक नेपालीको अ’पहरण ! – ताजा समाचार
भारतीय प्र’हरीद्वारा कपिलवस्तु घर भ’एका एक नेपालीको अ’पहरण !
ताजा समाचार । ३ कात्तिक, कपिलवस्तु :
भारतीय प्रहरीले जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका–२ का एक नेपालीलाई अ’पहरण ग’री भारत ल’गेको छ। स्था’नीय ४२ वर्षीय र’मजान मु’लसमान भारतीय प्रहरीले आइबार साँझ सो’ही गाउँपालिका १ को प’कडीबाट अ’पहरण गरे’को हो। भारतीय सीमा क्षे’त्र चा’कर चौ’डाबाट प्र’वेश ग’रेका भारतीय सु’रक्षाकर्मीले पक्राउ ग’री ल’वनी हुँदै सी’मावर्ती ह’थिहवा दो’हनी ना’काबाट भारततर्फ ल’गेको हो।
भारतीय प्रहरीको टो’लीले र’मजानलाई पक्राउ ग’री ल’गेको खबर आ’फूहरूलाई पनि प्रा’प्त भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक सुनील मल्लले जा’नकारी दिए।
अ’पहरणमा प’रेका र’मजान उ’पर भारतका वि’भिन्न स्था’नहरूमा अ’पराधिक क्रि’याकलाप ग’रेको आ’रोप छ। भारतीय प्रहरीको सर्वा’धिक खो’जीको सू’चीमा रहेका का’रण उनलाई पक्राउ गरिएको हुन स’क्ने स्था’नीयले आ’शंका गरेका छन्।
घ’टनाबारे सी’मा क्षे’त्र चाकर चौ’डाका नेपाली सु’रक्षाकर्मीहरूलाई भने खा’सै जा’नकारी छैन। साँझको स’मयमा प’कडी क्षे’त्रबाट र’मजानलाई पक्राउ ग’री भारतीय नम्बर प्ले’टको गाडीमा रा’खी लगेको ख’बर प्रा’प्त भएको इ’लाका प्रहरी का’र्यालय प’कडीका प्रहरी निरीक्षक गणेश सुवेदीले बताए।